Iincwadi ezintsha zoncwadi: iibhayografi, ii-autobiographies kunye nemifanekiso yobomi | IBezzia
Iindaba zoncwadi: iibhayografi, ii-autobiographies kunye neefoto zobomi
UMaria vazquez | 29/04/2021 12:00 | Iindaba, isiko
Iibhayografi, ii-autobiographies kunye neememo basisa kwimizobo yosapho egqibeleleyo rhoqo, ukugula kwabantu kunye nokungcungcutheka, amasiko asekuhlaleni kunye nezithethe zakudala zelizwe ... Ke ngoko, sifumanisa abo baphambili abahlukeneyo esasicinga ukuba siyabazi kwaye asibazi.
Sihambile i iikhathalogu ezivela kubapapashi abohlukeneyo Ukukhangela izinto ezintsha ezinokubhalwa kolu luhlu kwaye sifumene ezininzi kunokuba besinokuphakamisa. Ayizizo zonke le nto bayiyo, kodwa ukuba bamelwe, okanye sizamile, iimvakalelo ezahlukeneyo kunye nemixholo.
1 Andikaxeleli igadi yam okwangoku
2 Umama waseIreland
3 Utata kunye nomyuziyam
4 USvetlana Geier, ubomi phakathi kweelwimi
Andikaxeleli igadi yam okwangoku
Umbhali: Pia Pera
Umshicileli: Errata Naturae
Igadi entle eTuscany: uthando, ukufunda, indawo yokumelana. Iphupha, apho umbhali uPia Pera wakwaziyo ukuzalisekisa umbulelo kwifama elahliweyo: walungisa ikhabhathi ukuyiguqula ibe yindlu ezele ziincwadi, imizobo kunye nefenitshala; nangona kunjalo, akazange angenelele kwigadi yeziqhamo eyayiyirhangqile, igcwele imifuno yasendle eyayihamba apho ngenxa yomoya neentaka. Amakhulu eentlobo zeentyatyambo, imithi kunye nemifuno ayinike inkangeleko yehlathi eyalelwe ziindlela ezimbalwa.
Ngenye imini, umbhali wakufumanisa oko isifo esinganyangekiyo simsusa kancinci kancinci. Ejongene nokuthotywa komzimba wakhe, ngokuthe ngcembe enyanzelwa kukungakwazi ukuhamba kwesityalo, igadi, indawo apho ubomi buhluma khona nalapho "uvuko" lwenzeka khona, kuba yindawo yakhe yokusabela. Njengoko uyicingisisa, uzenzela iqhina elitsha kunye nendalo kwaye ubonise ukucinga kunye nokuhamba ngenjongo yobomi. Umbhali uzimamele kwaye azimamele, aze axele ukuba kwenzeka ntoni xa ebetyelele esibhedlele, iingcinga ezimhlaselayo ebusuku, iindinyana ezihamba naye nezimthuthuzelayo ... Ukunyanzeliswa sisifo sakhe kukumelana ngokuqhubekayo, akayeki ndiziva ndinomdla kwaye ndithantamisa kuyo yonke into emngqongileyo kwaye ihlala ihombise ubukho bayo: hayi iintyatyambo nje kunye neentaka ezihlala egadini yakhe, kodwa nakwinkampani yezinja zakhe, izihlobo zakhe, iincwadi, isisu ... «Ngoku yonke into imsulwa kunye nobuhle obulula », uyasityhila.
Umbhali: Edna O'Brien
I-Ireland ibisoloko ingumfazi, isibeleko, umqolomba, inkomo, iRosaleen, imazi, intombi, ihenyukazi ...
Umbhali ophumelele amabhaso e-Country Girls uluka ngobomi bakhe-ebuntwaneni bakhe kwi-County Clare, kwiintsuku zakhe kwisikolo sonongendi, ukuqala kwakhe ukumanga, okanye ukubalekela kwakhe eNgilane- kunye nomxholo weIreland, ilizwe leentsomi, imibongo, iinkolelo, zakudala amasiko, ubulumko obuqhelekileyo kunye nobuhle obugqithisileyo. Umama waseIreland, ngokweThe Guardian, “nguEdna O'Brien ngokusemandleni akhe. Iakhawunti ekhuthazayo nenhle yendalo esingqongileyo kwaye abo bahlala kuyo, bezele bubukrelekrele nobuchule.
Utata kunye nomyuziyam
Umbhali: Marina Tsvietáieva
UMarina Tsvetaeva wabhala le ngxelo ngobomi bakhe ngexesha lokuthinjwa eFrance wayipapasha ngesiRashiya, ngo-1933, kwiimagazini ezahlukeneyo eParis; Kwiminyaka emithathu kamva, ngo-1936, ezama ukusondela kubafundi baseFransi, waphinda wakhumbula iinkumbulo zakhe zobuntwana ngesiFrentshi, iseti yezahluko ezihlanu awazibiza ngokuba nguTata wam kunye nomyuziyam wakhe kwaye, nangona kunjalo, engazange ipapashwe ebomini. Kuzo zombini ezi nguqulelo ziqokelelwe kule ncwadi umbhali unikezela nge iimvakalelo neemvakalelo ombambazelayo womfanekiso kayise, u-Ivan Tsvetaev, unjingalwazi waseyunivesithi owanikela ngobomi bakhe ekusekweni kweMyuziyam yaseMoscow yoBugcisa, iMyuziyam yangoku yePushkin. Rhoqo laconic kunye namaqhekeza kodwa ngamandla angaqhelekanga wombongo, lo mbhalo umangalisayo, odlamkileyo kwaye uhambisa, usisondeza kufutshane nokusondelana nembongi engenakulinganiswa nabanye abambalwa.
USvetlana Geier, ubomi phakathi kweelwimi
Umbhali: Taja Gut
Umshicileli: Tres Hermanas
Ukuba ubomi bufanelwe sisiqinisekiso "sothando" sesomguquleli uSvetlana Geier. Uzalelwe eKiev ngo-1923, uchithe ubuntwana bakhe phakathi kwezinye zezona ngqondi zibalaseleyo kwilizwe lakhe. Ukucocwa kukaSteninisti kwabuphelisa ubomi bukayise, kwaye kamva, ngexesha lokuthinjwa kweJamani, wabona ubungqina bobuNazi ngohlobo olunegazi. Ngombulelo kubukrelekrele bakhe kunye nokuqhuba okungaqhelekanga okubalulekileyo, uGeer uya kuba, emva kweminyaka, oyena mguquleli ubalaseleyo kuncwadi lwaseRussia kwiJamani yenkulungwane yama-XNUMX. Inguqulelo entsha yeenoveli ezintlanu ezinkulu zikaDostoevsky yayingumsebenzi we-titanic awayethweswe ngawo isithsaba ubomi benkonzo yokuguqulela kunye noncwadi. Ibhayografi entle ebandakanya udliwanondlebe oluninzi olwenziwe ngumhleli kunye nomguquleli uTaja Gut noSvetlana Geier phakathi kuka-1986 no-2007.
Umbhali: Emmanuel Carrère
I-Yoga yingxelo yomntu wokuqala kwaye ngaphandle kokufihlwa kwe ukudakumba okunzulu kunye notyekelo lokuzibulala okukhokelele ekubeni umbhali alaliswe esibhedlele, kwafunyaniswa ukuba une-bipolar disorder wanyangwa iinyanga ezine. Ikwayincwadi malunga nengxaki yobudlelwane, malunga nokuwohloka kweemvakalelo kunye neziphumo zako. Kwaye malunga nobunqolobi bamaSilamsi kunye nomdlalo weembacu. Ewe ewe, ngendlela ethile malunga neyoga, umbhali ebesebenza kuyo iminyaka engamashumi amabini.
Umfundi unombhalo ezandleni zika-Emmanuel Carrère ku-Emmanuel Carrère obhalwe ngendlela ka-Emmanuel Carrère. Oko kukuthi, ngaphandle kwemithetho, ukutsiba kwisithuba ngaphandle komnatha. Kudala umbhali wagqiba kwelokuba ashiye ngasemva iintsomi kunye necorset yohlobo. Kwaye koku kukhazimla kwaye kwangaxeshanye umsebenzi obuhlungu wentliziyo, i-autobiografi, izincoko kunye neendaba zobuntatheli ziyahlangana. UCarrère uthetha ngaye ahambe inyathelo elinye ekuphandeni kwakhe kwemida yoncwadi.
Yeyiphi kwezi biographies oza kuyifunda kuqala? Ngaba ukhe wafunda? Kucacile kum ukuba ndiza kuqala ngokuthi "Andikayichazi le gadi yam okwangoku", kodwa andazi ukuba yeyiphi enye ibhayografi endiza kuyilandela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » Iindaba zoncwadi: iibhayografi, ii-autobiographies kunye neefoto zobomi
Ungayisusa njani iintsumpa
Cwangcisa ikhaya lakho ngeendlela ezingama-20/10, wazi ukuba liqulathe ntoni